Home News Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna:- oo digniin u diray Shacabka Magaalada Baydhabo!!
Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna:- oo digniin u diray Shacabka Magaalada Baydhabo!!
Ku simaha Madaxweynaha maamulka koonfur Galbeed ahna Gudoomiyaha Baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed oo warbaahinta kula hadlay Magaalada Baydhabo goor dhow ayaa ku baaqay in la joojiyo Banaanbaxyadda ka socda Magaalada Baydhabo.
Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa dhaliilay Shacabka Magaalada Baydhabo Banaanbaxyadda ka wadda ee kasoo horjeedda xiritaanka Sheekh Mukhtaar Roobow oo uu sheegay in ay yihiin kuwo yar.
Waxaa uu sheegay in ay muhiim tahay in ilaaliyo Ammaanka Magaalada Baydhabo, islamarkaana la joojiyo Banaanbaxyadda ka socda Magaalada Baydhabo oo uu sheegay in ay waddaan kuwo kasoo horjeedda Ammaanka.
Banaanbaxyadda ka socda Baydhabo ayaa lagu toogtay Saakay Xildhibaan Cabdishakuur Ibraahim Yacquub.
Wali xaalad kacsanaan ah ayaa laga dareemaya magalada Baydhabo waxaana qeyba ka mid ah magalada laga maqlaya rasaas Goos Goos ah.
Previous articleWararkii Ugu Dambeeyay Banaanbaxyo xoogan oo wali ka socda Baydhabo!!
Next articleCiidamada kenya oo xiray Gudoomiye Degmo iyo xiisad xoogan oo ka dhalatay
Wafdi ka socda Somaliland oo kulan gaar ah la qaatay MW...